डा. खतिवडा बालुवाटार छिरेपछि सेयर बजारमा गिरावट, २ अर्ब १६ करोडको कारोबार « Artha Path
डा. खतिवडा बालुवाटार छिरेपछि सेयर बजारमा गिरावट, २ अर्ब १६ करोडको कारोबार
काठमाडौं । सेयर बजार दैनिक रुपमा ओरोला लाग्दै गएको छ । साताको पहिलो दिन ओरालो लागेको बजार दोस्रो दिन सोमबार पनि बजारमा गिरावट आएको छ ।
सेयर बजारमा गिरावट आउनुमा अर्थमन्त्रीको टुंगो नलाग्नुले पनि विश्लेषकहरुले बताएका छन् । केहिदिन अघि मात्रै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राजिनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम आफैले सम्हालिरहेका छन् । यसले गदा सेयर बजारमा गिरावट आएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
त्यस्तै खतिवडाले राजिनामा दिएपछि पनि प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार बन्ने चर्चाले पनि केहि प्रभाव परेको बताईएको छ ।त्यस्तै हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले ब्यापारी तथा उद्योगीहरुसंगको छलफलको क्रममा डा. खतिवडालाई विशेष भूमिकामा राखेर छलफल गर्दाले पनि असर परेको अनुमान गरिएको छ ।
सोमबार नेप्से परिसूचक १२.१७ अंक घटेर १४८७.८१ विन्दुमा झरेको ने्रप्सेले जनाएको छ । सोमबार सेन्सेटिभ इण्डेक्स ३.५५ अंक घटेर २९८.६४ विन्दुमा झरेको छ । आज दिन १९२ कम्पनीको २८ हजार ७८ पटकको कारोबारमा २ अर्ब १६ करोड ४९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको ५५ लाख ९५ हजार ५५१ कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
आज ३ कम्पनी उन्नती सहकार्य लघुवित्त, यूनिर्भसल पावर कम्पनी र जोशी हाइड्रोपावरका शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै आज एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्टको शेयरमूल्य निरन्तर दोस्रो कारोबार दिन नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ । सो कम्पनीको शेयरमूल्य यस दिन ४८ रुपैयाँ घटेर ४३६ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ ।
सोमबार कारोबारमा आएका १२ उपसमूहमध्ये ४ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी ८ उपसमूहको परिसूचक घटेको छ । यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक २.४८ प्रतिशत बढेको छ भने बैंकिङ्ग उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक १.४२ प्रतिशत घटेको छ ।